ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5နံနက်စာပထမဦးစွာနေ့ရက်များ Brilliant ဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 20 2021 |2မိဖတ်ပြီးသား
နံနက်ယံ၌တွေ့ဆုံရက်စွဲ၏ "လေးနက်မှု" အတွက်မျှော်လင့်ချက်များနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးသာဖြစ်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်. သင်တစ်ခုခုကိုပူဖောင်းအတွက်အသိစိတ်အလွန်အမင်းအဆင်မပြေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခံစားမည်ကိုမဖြစ်နိုင်ဖြစ်သည်, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်-အာရုံစူးစိုက်စားသောက်ဆိုင်တွင်, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်၏အလွန်အခါသမယအစဉ်အလာတစ်ခုနိမ့်သော့ချက်အရေးကိစ္စဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုတဦးဖြစ်သကဲ့သို့. သို့သော်, ကိုယ့်ကော်ဖီတက်သည်အစည်းအဝေးနဲ့မတူပဲ, ပုံမှန်အားဖြင့်မနက်စာစားရက်စွဲများကိုတခြားလူတစ်ဦး၏ quirks သိရန်ရတဲ့အတွက် ပို. built-in အခွင့်အလမ်းများပေး. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ကြက်ဥပေါ် ketchup ကြိုက်ရှိမရှိလေ့လာသင်ယူခြင်းကနေသူတို့ waffles vs pancakes ပတ်သက်. မည်သို့ခံစားရဖို့, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ရက်စွဲများ "သွား-ဖို့" စကားပြောဆိုမှုအကြောင်းအရာများကိုလည်းဘာပြောရစဉ်းစားနိုင်တဲ့အခါလွယ်ကူပေး.
သင့်ရဲ့နေ့စွဲရဲ့တိုက်ခန်းကိုဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတူတကွမြို့ကိုရှာဖွေစူးစမ်းထွက်တညဉ့်သာရှိလိမ့်မည်ဟုလျှင်အံ့ဩခြင်းမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ညစာစားရက်စွဲများမကြာခဏဘယ်လောက် / သည့်အခါအတိအကျညဉ့်ကိုအဆုံးသတ်စေမည်အကြောင်းတစ်ခုမသေချာမရေရာမှုနှင့်အတူလိုက်ပါသွားကြသည်. ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ရက်စွဲများနှင့်အတူ, သို့သော်ငြားလည်း, နှစ်ကုန်အချိန်အတော်အတန်ကိုအလွယ်တကူ Pre-စီစဉ်ထားနိုင်ပါတယ်. တကယ်တော့, ကပင်ကနဦးနေ့စွဲအချိန်တက် setting များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်. ဥပမာအားဖြင့်, အကြံပြုခြင်း 9am မှာမနက်စာစားရက်စွဲလည်းပေါ့ပေါ့တန်တန်လိုက်ပါနိုင်, "ငါတစ်ဦးဂေါက်သီးကစားများအတွက်စီစဉ်ထားတယ် 11;"ဒီဘက်ပါ, နှစ်ဦးစလုံးသင်တို့၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ကြောင်း in-the-ကျွမ်းကျင်မှုရက်စွဲမည်မျှကြာမြင့်မည်အကြောင်း. ထို့အပြင်, သင်ကစ်နှင့်ဟင်းရည်ပေါ်လှဲ chomp နေစဉ်နေ့ရက်ကိုအရာကြွင်းလေသမျှအဘို့သင့်အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီဆြေးြေိံးစကားပြောဆိုမှုနောက်ထပ်လွယ်ကူသော "သွား-ဖို့" ခေါင်းစဉ်နိုင်ပါတယ်.
သူတို့ကတစ်ဦးလွယ်ကူ-To-ပုံထွက်စားဆင်ယင် code တွေကိုရှိသည်
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတစ်ခုမတ်မတ်ရွေးချယ်ခြင်းအလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးသင့်ဗီရိုထဲကနေပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ရာတွင်ထက်အခါမျိုးတွေမှာပေါ့သိသိသာသာပိုဖြစ်နိုင်. ပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်ကြမည်မှာသေချာပါသည်အရေးကြီးလှသည်, သင်မူကား, တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်များအတွက်ဖြစ်သင့်သည်အဘယ်သို့ dressy သို့မဟုတ်ရှောင်တခင်ထွက် figuring မကြာခဏပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါတီများအတွက်မလိုလားအပ်သောစိတ်ဖိစီးမှု၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်. ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်နှင့်အတူ, သို့သော်, ကျယ်ပြန့်ဖွင့်ဒိုင်ယာလော့မေးခွန်းကိုမှထွက်လုနီးပါးဆက်ဆက်ဖြစ်. ချွေးနဲ့တစ်ဦး t-shirt ဟာထဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်ကိုမဖြစ်နေချိန်မှာ, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ရက်စွဲများနေဆဲပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလျှော့ပေါ့ dictate, ရှောင်တခင် (ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ) ဝတ်စားဆင်ယင် code ကို.
ဥပဒေကြမ်းကိုအချိုပွဲမှ appetizers မ​​ှအချိုရည်မှ entrees မှဆန့်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်ကညစာစားပွဲရက်စွဲနှင့်မတူဘဲ, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ရက်စွဲများနီးပါးအများဆုံးနေရာမှာတော်တော်လေးအတော်လေးစျေးနှုန်းသက်သာဖြစ်ရမှအာမခံ. သေချာတာပေါ့, ကော်ဖီသို့မဟုတ်လိမ္မော်ရည်အမိန့်သို့မဟုတ်အစား hash Brown ၏တစ်ဦးသီးသောအသီးသုပ်ဘက်များအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးပါဝင်နိုင်တယ်ဥပဒေကြမ်းမှ add-ons, ဒါပေမယ့်ခြုံငုံ, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ရက်စွဲများ၏စျေးနှုန်းကိုခန့်မှန်းရန်လွယ်ကူသောများမှာ. ဒါဟာသင်နဲ့သင့်ရဲ့ရက်စွဲနှစ်ခုလုံးအတွက်တစ်ဦးကို double ဆုကြေးဖြစ်ပါသည်: သင်ကအလားအလာကောင်းသည့်မကောင်းတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ချိုးဖဲ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, နှင့်သူ / သူမသင်သူမ၏ / သူ့ကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းမှ hefty စုစုပေါင်းဖြုန်းလောက်မကောင်းတဲ့ခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
အိုကေ, ဒါကြောင့်ဒီတစ်ဦးလမ်းပိုင်းတစ်နည်းနည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သုတေသနလုပ်ငန်းပုံမှန်အခါသမယတွင်ကျန်းမာသောအစာစားခြင်းမနက်စာမစားခင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုတိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူဆက်နွယ်ကြောင်းပြသ. တကယ်တော့, အောင်မြင်တဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ခရီးစတင်လာဆောင်မှာများအတွက်အကောင်းဆုံး "အကြံပေးချက်များ" ၏တဦးတည်းနေ့တိုင်းမနက်စာစားအစာကိုစားရန်ဖြစ်သည်. ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်စားခြင်းဟာသင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်တစ်ဦးကအရသာလမ်းမသာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏ညအချိန်အစာရှောင်ခြင်း mode ကိုကန်ထုတ်-start သင့်ဇီဝြဖစ်တဲ့ကြယ်တို့၏လမ်းင်. ရိုးရှင်းစွာအသွင်း, ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်သင့်ရဲ့နေ့စွဲ ဖိတ်ခေါ်. ပြောဆိုရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, "ဟေ့, ငါသည်ငါ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်သူတစ်ဦးပေါ့, ငါပဲလွန်းသင်တို့အဘို့ဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ,!"